Tsy niakatra tany Ziona ary rava tao Auschwitz, nilaza tamin’izy ireo ny Rebbe mba tsy hiakatra. Raby Michael Avraham
Tsy niakatra tany Ziona ary rava tao Auschwitz, nilaza tamin’izy ireo ny Rebbe mba tsy hiakatra.
Responsa > Sokajy : Finoana > Tsy niakatra tany Ziona ary rava tao Auschwitz, nilaza tamin’izy ireo ny Rebbe mba tsy hiakatra.
Menatra noho ny henatra Nanontaniana 5 volana lasa izay
Afa-po ny fianakaviako raha hiverina any Ziona. (Noho ny fankahalan'ny jentilisa manodidina, dia nanan-karena be izy ireo ka tsy nanana na inona na inona)
Ny Rebbe dia nilaza tamin'izy ireo hijanona any an-tsesitany ary nampanantena fa ho tsara izany.
Minoa fa tsy niverina tany Ziona sy Efraima tao Auschwitz faha-XNUMX ny rebbe ary ny ran'ny taranany koa dia avy tamin'ny rebbe izay nampanantena ary noho ny fampanantenany dia rava.
Fa ao amin'ny Jeremia XNUMX, ny mpaminany sandoka dia mamporisika ny fiverenan'i Ziona ary Jeremia amin'ny anaran'Andriamanitra dia milaza fa tsia.
70 taona monja
Ary ankehitriny dia nivadika ny fironana, any Babylona angamba isika dia hanao trano sy hanambady vehivavy. Ary ny Jerosalema hovonoina sy ho mosary.
Inona ary no marina?
Ny hiverina any Ziona sa ny mifamadika amin’izay hiorim-ponenana any an-tsesitany?
Ity dia clutch henjana. Samy irery. Ny rebbe iray izay nilaza ny heviny mba tsy hivoaka noho ny antony manokana, dia nilaza zavatra ara-dalàna tanteraka. Izay tsy nety tamin'ny farany dia tsy manery azy amin'ny vokany. Tsy misy ran'olona amin'ny tanany. Raha nanao fampanantenana tsy tompon'andraikitra izy dia mety kokoa.
Raha ny amin'ny mpaminany kosa dia milaza zavatra ara-paminaniana izy ireo, ka hafa mihitsy ny resaka. Raha mampanantena zavatra izy ireo dia amin’ny anaran’ny Tompo.
Amin'ny ankapobeny, tsy mitovy foana ny valin'ny fanontaniana hoe hifindra monina. Indraindray dia mety ny miakatra ary indraindray tsy. Na dia misy aza ny didy handaminana ny tany, fa ny mpaminany dia manaisotra na inona na inona ao amin'ny Torah amin'ny Holocaust na amin'ny ora.
Miaraha misoratra anarana 3,088 fanampiny
Azo atao ve ny miditra amin'ny Illuminati?
Misy latabatra napetraka
Fampiharana  midira ao amin'ny illuminati whatsapp / [+27833428710],  be illuminati in kurman klerksdorp mmabatho mafikeng suncity potchefstroom zeerust brits zeerust rustenburg francenburg swartruggens hartbeespoort, Ampiharo amin'ny fiaraha-monina illuminati direct +27833428710 netherlands luxembourg soeda fanjakana mitambatra austria malta slovenia rosia portogey repoblika czech iceland greece spain dermark italy .JOIN ILLUMINATI ORDER CALL: +27833428710 FOR RICH, VOLA, HARENA, FIVAVAHANA, FIVORIANA, ANDRIAMANITRA, ANDRIAMANITRA. Mpitandrina ve ianao, na mpanao politika, na lehilahy na vehivavy mpandraharaha, na mpitendry mozika na mpanakanto, te ho malaza ve ianao na te hanan-karena na mahery dia azonao atao ny manatratra ny nofinofinao amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Illuminati amin'ny nofinao sy ny fonao rehetra. azo tanterahina tanteraka ny faniriana. Milaza ny olona fa manankarena miavaka ny Illuminati. Marina ve izany? Marina fa mpanankarena avokoa ireo mpikambana roa ambin'ny folo ao amin'ny Filan-kevi-pitantanana, fa ny vola ho antsika dia mamatsy ny iraka ataontsika ary ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonintsika dia tsy misy hafa. Teraka afaka ianao ary maty afaka nefa ho velona afaka ve ianao? Raha mbola ny fahazarana sy ny fahazarana no mibaiko ny lamin'ny fiainana amin'ny lafiny vaovao amin'ny fanahy dia hanamarika mitambatra. Ny "harena" an'ny Illuminati dia amin'ny endrika harena sy vola tsy misy vidiny. Ny mpikambana sasany ao amin'ny Illuminati dia nahazo harena be; afaka miditra daholo ny rehetra raha mbola mitazona ny tsiambaratelo? Fotoana mampientanentana ny hidirana ao amin'ny Fikambanana Illuminati ka mangataha ho Mpikambana izao!FOTIKA, fanompoam-pivavahana ara-panahy ity izay manampy anao hahomby amin'izay rehetra ataonao eo amin'ny fiainana. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra dia raisina an-tanan-droa mba hanatevin-daharana ity Tempolin'ny Modely, DJ ary Mpangaly Rapper eto amin'izao tontolo izao ihany. Nipoitra ny fahafahana mampientam-po ho an'ny rehetra hiditra ao amin'ny illuminati Secret Society. Tonga mijoro vavolombelona ny mpanao politika. Ento ny anaran'ny olon-tianao na ny Namanao ary jereo ny fiovana azon'ny lehilahy sy vehivavy mpandraharaha avy amin'ny fiarahamonina illuminati. Tonga ny mpianatra ary manadio ny hoavinao. MIALA AMIN’NY FAHANTRANA. Mialà amin'ny lalan'ny fahantrana mankany amin'ny lalan'ny fanambinana dieny izao. Raha tery ny vola ary tsy mandeha tsara ara-bola ny zava-drehetra, ny fiarahamonina Illuminati dia hanome hery anao hanova ny fiainanao sy hiaina ny fiainanao amin'ny fomba feno. ANTSO: +27833428710. Email: joinilluminatisa@gmail.com
Moshe Oppenheimer On Valiny Azo atao ve ny miditra amin'ny Illuminati?
Michi On Eto ve i Iran? Momba ny fandrosoana sy ny liberalisma saina (Tsanganana 483)
mahafinaritra On Eto ve i Iran? Momba ny fandrosoana sy ny liberalisma saina (Tsanganana 483)
Mitenena ara-potoana On Eto ve i Iran? Momba ny fandrosoana sy ny liberalisma saina (Tsanganana 483)
Emanuel On Eto ve i Iran? Momba ny fandrosoana sy ny liberalisma saina (Tsanganana 483)